မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: inside Job!! ကူညီမည်။ keep in touch!! “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Posted by အာဇာနည် at 3:12 PM